ब्लग - साहित्य/ विश्वमाला
केही वर्ष यतादेखिका नोबेले पुरस्कार विजेताहरुलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि एकेडेमीले उत्तरआधुनिकवादका लेखकहरुलाई कति बेवास्ता गरेको छ भनेर देख्न सकिन्छ । पछिल्लो केही वर्षमा काज्वो इशिगुरो र म्यारीयो भार्गोस लोसाबाहेक अधिकांश बाँकी विजेताहरु नोबेल पुरस्कारकालागि खासै योग्य व्यक्तित्वहरु थिएनन् ।
भर्खरै संस्कृतका महाकवि कालिदासको ऋतुसंहार कृतीलाई एएनडी हस्कर नाम गरेका बिद्धानले अग्रेजीमा अनुवाद गरेका छन्। समाजको चित्रणलाई यूगान्तकारी रुपमा प्रस्तुत गरिएको यस कृतिलाई प्रकृतिसंग पनि निकट अभिव्यक्तिका रुपमा लिइएको छ ।
विचित्रको कुरा के छ भने, टैगोरले कहिल्यै पनि दक्षिण कोरिया भ्रमण गरेका थिएनन् । उक्त देशका लागि उनले प्रयोग गरेका “पूर्वको ज्योति” भन्ने शब्दावलीले कोरियालीहरुको मस्तिष्कमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । टैगोरको ल्याम्प अफ द इस्ट भन्ने कविता नसुनेको दक्षिण कोरियाली सायदै भेटिन्छन् ।
संसारकै खुशी देशः फिनल्याण्ड
फिनल्याण्डका शासकहरुले देशको भलाइको लागि सोचे र राष्ट्रहितका निर्णयहरु लिए । विकासका पूर्वाधार र प्रविधिलाई पनि सँगसँगै लगे । मुलुकलाई कल्याणकारी बनाउँदै लगे । “नागरिकबीचको विश्वासको वातावरण अत्यधिक छ । भ्रष्टाचार र अपराध शून्यप्राय नै छ जसले गर्दा व्यापारको वातावरण छ । कामहरु छिटो मात्र होइन भरपर्दो तरिकाले पनि सम्पन्न हुने गर्दछ,” २५ वर्षदेखि फिनल्याण्डमा बस्दै आएका क्यानेडेली नागरिक एन्ड्रे चाकर बताउँछन् ।
कसैको मृत्यु हुँदा, उनको परिवारलाई धैर्य गर्न भनिन्छ र बिस्तारै धैर्य गर्न सिक्दै पनि जान्छन्, के तर इन्टरनेटले पनि उनीहरुलाई धैर्य गर्न सघाइरहेको छ त ? समस्या त यो छ कि इन्टरनेटमा विगतमा भएका गतिविधिका कारण डिजिटल स्मरणहरुले कति सजिलै मानिसपटलमा रहेका मृतकका सम्झनाहरुलाई झकझक्याइदिन्छ र वर्तमानमा बाँच्ने अभिलाषालाई पुनः एक पटक कमजोर बनाइदिन्छ ।
एउटा ताराको अन्त्य , स्टेफन हकिङ
स्टेफन हकिङको निधनसंगै ब्रम्हाण्ड खोजिको एउटा अध्याय नै सकिएको छ । उनका अनुसन्धान तथा साध्यले विज्ञान विश्वमा फड्को मार्न ठूलो योगदान दिएको छ । मानवप्रेमी तथा विज्ञानप्रेमी हकिङको अभाव विश्व समुदायले आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने नै छ ।
- Mar 13 2018
गत नोभेम्बरमा किमले उत्तर कोरियासँग अमेरिकाको कुनै पनि ठाउँसम्म पुग्न सक्ने मिसाइल अब उत्तर कोरियासँग रहेको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिका कारण पनि अहिलेको एकाएकको प्रतिबद्धतामाथि अमेरिकीहरु सशंकित भएका हुन् । शान्तिकोलागि अमेरिकाले कुनै कदम नै नचालेको अवस्थामा पनि उत्तर कोरियाले वर्षौंदेखिको त्याग र परिक्षणलाई यति सजिलै कसरी त्याग्न सक्छ भन्ने कौतुहलता पनि उब्जिएको छ ।
मिलनको बाटोतर्फ चीन र भारतः ड्रयागन र हात्ती झगडा नगरी सँगै मिलेर नाच्नुपर्ने
चीन र भारतबीच १० हप्ता लामो समयसम्म चर्किएको डोक्लाम विवादमा पनि विदेशमन्त्री वाङ भारतविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने गरेका थिए । बिहिबारे भने उनी नम्र रुपमा प्रस्तुत हुँदै दुई देशको सम्बन्ध सुधारका लागि दुवै देशका नेताहरुले कुशल रणनीति लिँदै अघि बढ्नुपर्ने र दुवै देशले आपसी शंकाउपशंका हटाउनुपर्ने बताए ।
उत्तर कोरियाको वार्ताको प्रस्ताव
बकम्फुसे ट्वीटका लागि परिचित बन्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यस पटकको ट्वीटले भने विश्वलाई आशावादी बनाएको छ । “उत्तर कोरियामा वार्ताको लागि प्रगतिको बाटो खुलेको छ । धेरै वर्षमा पहिलो पटक, यसमा संलग्न अधिकारीहरुले गम्भीर प्रयास प्रस्तुत गरे । विश्वले हेरिरहेको र कुरिरहेको छ । झुटो आशा नै सही तर अमेरिका जुन दिशा लिन पनि तयार छ” भन्दै उनले उत्तर कोरियाको निर्णयलाई स्वागत गरे ।
विदेशी भाषा पढाएमा आउँदा पुस्ताको कोरियन भाषामा प्रभाव घट्दै जाने उल्लेख भएको थियो । दक्षिण कोरियाका चाइल्ड केयर पोलीसि र अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनका निर्देशक क्योन जि योगंले विभिन्न शिक्षा विज्ञ अनि न्यूरोसाईन्टीस्टहरु लाई उद्धत गर्दै अन्य भाषा सिक्ने समय कक्षा ३ बाट मात्र सुरु हुने बताए ।
- Feb 27 2018
सिरियन शरणार्थीको डायरीबाट
अहिले सिरियाका घटनाक्रम अनि त्यहाँका बालबालिकाका अवस्थाहरु बारे समग्र विश्वमै आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल लगायत मीडियाहरुमा पनि सिरियाका कुराहरु छन् । यस्ता धेरै पिताहरु छो्रीहरुको भविष्का लागि सिरियाबाट अन्य देश जोखिम मोलेर पुगेका छन् । यस डायरीका कथा आजलाई यति नै, अर्को जिवन्त अनि यथार्थ कथा लिएर फेरि आउनेछौं
२४४ बर्षपछि अनि लगभग ६५० किमी वरपर रहेका कवी जयसी अनि दिल्लीका सुल्तान खिल्जीबीचको तालमेलमा इतिहास कहाँ पिल्सीएको छ, चलचित्रमा के कुरा राखियो अनि राखिएन भन्ने चाँही बुझ्न अनि बुझाउन अफ्ठेरै कुरा हो । तुलसीदासका कृतीहरु रामचरित्रदास झैं अवधी भाषामा पत्तमावत पनि उत्तिकै चर्चित र घरघरको कहानीका रुपमा बर्षौ देखि भनिन्दै अनि मनन गरिँदै आएको छ । सुन्दरता अनि त्यागको मुर्तीका रुपमा पदमावतीलाई लिइन्छ ।
नईरा वाहिद का नूनीला कविताहरु
दुख्खको अपेक्षा गर बर्षाको आश गरेझैं चाहे बर्षा होस् या दुख्ख दुबैले तिमीलाई सफा गरेर जानेछन्
विद्यापति कवि गाओल रे,धनि धरु मन आस। आओत तोर मनभावन रे,एहि कातिक मास।
यस कृतीको अन्तमा पात्र एनी ले काठमाडौ आएपछि माया, त्याग अनि यर्थाथको झल्को पाएको देखाइन्छ । राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक ताकाका दृश्यहरु लाई काठमाडौका पवित्र अनि पुरातात्वीक महत्वका श्रृगांरसमेत यिनले पस्केकी अलौकीक स्वाद आज ६० बर्ष पनि पनि बिछट्टै पढ्न लायक छ ।
राष्ट्रपती पद पश्चात मात्र मैले महसुस गरे कि यत्तिका बर्ष मेरो अनि मिचेलको जिवन धेरै द्रुत गतीमा कुदिरहेको रहेछ भनेंर, अहिले त सबैकुरा स्लो मोसनमा हिँडिरहेको जस्तो लाग्दछ, ओवामाले थपे । महत्वपूर्ण कुराहरु तत्कालै गरिनुपर्नेमा महत्व दिँदै कसैले क्षणभरमै आइपुग्छु भनेपनि केही पलमात्र ढिला भएमा पनि कसैको ज्याननै जाने सम्म हुनसक्दछ
के म्यानमारकी नेतृ सुकीलाई रोनिगिया नरसंहारको आरोप लगाउन जायज छ ?
उता म्यानमार शासनको बिगत हेर्ने हो भने सन् १९६२ मा मिलिटरी जुन्ना शासनमा आएको देखिन्छ, मानव अधिकारको खुलेयाम अवहेलना गर्दै शासन गरेका यि आततायी समुहले सन् २००८ सम्म म्यानमारको शासन गरेको पाइन्छ । सन् २००८ मा म्यानमारमा संविधान जारी भएको हो, म्यानमारका हरेक समुदाय र सम्प्रदायलाई बर्मेलाइज गर्ने संविधानको खाका भएपनि रोनिगियाको हकमा त्यसो हुन नसकेको प्रष्ट छ ।
यिनै बालक जिसस पछि गएर महान प्रवर्तक भएर हजारौं बर्षपछि पनि बिभिन्न नाम अनि स्वरुपमा करौंडो मान्छेका हृदयमा बिराजमान स्मृती अनि धर्मका प्रतिमूर्ति भएर बस्न सफल छन् । हुन त भगवानका पुत्रका रुपमा आउने अवतारहरुको जन्मका किस्साहरु सदैव अचम्मका हुने गर्दछन् । जिसस हुन या बुद्ध हुन या कृष्ण नै किन नहुन् ?
अचम्मको कुरा त के हो भनें बेलायती राजपरिवारको बिवाहको समारोहमा खानेकुराको परिकारका मेनुहरु भने फ्रेन्च भाषामा लेखिएको हुन्छ । सैयौ बर्षअघि बेलायती राजपरिवारमा फ्रेन्च भान्सेमात्र रहने गर्दथे र यसै कारणले पनि खानेकुराहरुको मेनु फ्रेन्च भाषामै रहने गरेको बताइन्छ ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको परमाणविक प्रर्दशनले बिश्वलाई तेश्रो बिश्वयूद्धको संघारमा लाने सबैले अड्कल काटिरहेका छन्, अमेरिकी राष्ट्रपतीका कडा कदमहरु अनि उत्तर कोरियाली शक्तिप्रदर्शन अनि त्यसमाथी उत्तर कोरियाका प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोगी देशहरु । के बिश्व अब बिश्वयूद्धको लागि ध्रुविकृत हुन थालेकै हो त ?
- Dec 08 2017
यूरोपको यो उदासिनता अनि समग्र अरब राष्ट्रहरुको भावना बिपरित इज्रायलको अन्धो समर्थनमा अमेरिकी राष्ट्रपतीको यो कदमले कहँ पूर्याउने हो, हेर्न बाँकी छ । उता इज्रायलको सरकारले अमेरिकाको यस कदमको स्वागत गर्दै शान्तिको द्धार खुलेको बताएका छन् । इज्रेली प्रधानमन्त्री नेतेनीयाहुले सहृदय अमेरिकाको यस कदमलाई महत्वपूर्ण कदम करार दिदै स्वागत गरेका छन् ।
४ महिनाअघि उत्तर कोरियाले अन्तराष्ट्रिय जगतमा व्यापक भय उत्पन्न गराउने हेतुले जापान माथि परमाणु क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो । क्षेप्यास्त्र आक्रमण नभई भय उत्पन्न गराउने र शक्ति प्रर्दशन गराउने हिसाबले प्रहार गरिएको थियो । अमेरिकाले भने उत्तर कोरियालाई आतंकवादको कालोचसूचीमा राख्न चाहेको थियो, उता चीनले पनि उत्तर कोरियालाई कोईला निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर उत्तर कोरियाको रवैयाको प्रतिरोध गरेको हो ।किन हो त उत्तर कोरिया यति धेरै देशहरुको हेला सूचीमा परेको ?
Suyog Dhakal - Sep 12 2017
एउटा विषको बृक्ष
यस कविता सम्पूर्ण रुपले सञ्चारको सीप अनि मित्रताको वरिपरि लेखिएको छ । उठेको रिस अनि साथीसँग अभिव्यक्त गरेपछिको रिस मरेका कुराहरु यस कवितामा लेखिएको छ । सि मनमा पाल्नुनै विषको बृक्ष जस्तो हो भन्ने उदहारण यस कवितामा लेखिएको छ । स्याउलाई मित्रता अनि मायो दृष्टान्तका रुपमा ल्याइएको छ ।
बादल कविता / रबिन्द्रनाथ टेगोर
टेगोर - सन् १८६१ देखि १९४१)_ संसारका पहिला यस्ता व्यक्ति हुन जो सर्वप्रथम गैरअंग्रेज नोबल साहित्य पुरस्कारका बिजेता हुन् । अर्कोतर्फ भारत र बगंलादेश दुबैदेशको राष्ट्रगान लेख्ने एकजना साहित्यीक हस्ती, संसारले शब्द र भावका लागि पुज्ने व्यक्ति हुन रबिन्द्रनाथ टेगोर ।
बिश्वप्रसिद्ध बालकथाको श्रेणीगत पुस्तक ह्यारी पोट्टरको २० बर्ष भएकोमा लेखिका जे के रोलिगंले ट्वीट गर्दै आज आफुले एक्लै बाँचीरहेको संसारलाई बिश्वका कैयन पाठकसमक्ष बाँढेको २० बर्ष भएको बताएकी छिन् । आठौं सस्करणपछि अब ह्यारी पोट्टर हामीमाझ नआउने अर्थात अब यस पात्रमा पुस्तक नलेख्ने लेखिकाले जनाएकी छिन् ।
कथा, कहानी, गीत, लोकगीत, संवाद, नाटक, उपन्यास जेसुकैको कुरा गरे पनि विश्वमै सबैभन्दा पुरानो लेखिएको काब्य अथवा कहानी हो, रामायण । हामी संझन सक्छौ कि यदि रामायण लेख्ने लेखक महर्षि बाल्मिकी आज हामीमाझ भएको भए उनि कति खुशी हुन्थे होलान् ? हजारौ वर्ष पहिले उन्ले मसि चोपेका ग्रन्थ आजपनि संसारभरि महिमा, स्तुति र मुक्तकण्ठले पढ्ने र पढाउने गरिन्छ । रामायणका हरेक चरित्र र तिनको वर्णन पुजनीय भइसकेको छ ।
मृत्यू दुख्खद कुरा हो र मान्छे मरेपछी मरेको शरीरलाई धार्मीक र सास्कृतीक रुपमा अन्येष्टीगर्ने चलन मानव सभ्यतासँगै रहिआएको छ । मान्छे मरेको भनेपछी हामीलाई भित्रैवाट चिसो पसेको अनुभव हुने र नराम्रो साथै डर पनि लाग्ने गर्दछ ।
चण्डालिकाः रविन्द्रनाथ टेगौर
आनन्द एउटा वौद्धमार्गी भिक्षु हो र उ वौद्धमार्गमा जानु अघि एकजना अछुत नै थियो , आफ्नो हातले छोएको र आफूले दिएको पानी एकजना गैर दलित धार्मिक ब्यक्तिले खाएको प्रथम पल्ट अनुभव प्रकृतीले एकदिन पानीको मुहानमा आफूले दिएको पानी आनन्दले खाएपछि मात्र गरेकि हुन र आनन्दको यो खुकुलो हृदयका कारण उनि आनन्दप्रति आकर्षित हुन्छिन । आनन्दले प्रकृतीसग कुराकानी गर्दै समाजले उन्लाई विनाकारण अछुत बनाएपनि उन्ले आफ्नो मनछोटो नपार्न अनुरोध गर्दछन । आनन्दको यो वचनले प्रकृती आफू उनिप्रति आकर्षित मात्र नभई आनन्दलाई आफ्नो मोक्षकर्ताका रुपमा पनि मनमनै आदर्शरुवरुपमा लिन थाल्दछिन ।
जर्ज वनार्ड शा, विश्व प्रसिद्ध नाट्कार हुन र सन १९१४ मा प्रदर्शनमा आएको यो विश्वप्रसिद्ध नाटकका उपर धेरै चलचित्रहरु पनि फिल्माइएको छ । पिगमिलियन एउटा ग्रीक भगवानको नाम हो जो आफैले गरेको श्रृजनासँग प्रेममा पर्दछन र यसै गरि यस उपन्यास पनि एकजना भाषाको सर्जक प्राध्यापक हिगिन्सको कथाका वारेमा छ । जर्ज वनार्ड शा एकजना आइरिश नाट्यकार हुन जस्ले धेरैजसो सस्थागत धार्मिक अभ्यासका विरोधगर्दै लेख्नेगर्दथे ।
Suyog Dhakal - Aug 06 2016
४४ बर्षको कारावासपछिको जीवन
जिन्दगी यस्तै रहेछ, मलाई मेरो बालपन एसबरी पार्कमा बिताएका क्षणहरु एकदमै याद छ, त्यतिबेला हाम्रो स्कूलमा अरुलाई दुःख दिने साथीहरुसँग म त्यसो नगर भनेर झगडा गर्थे । अरुलाई दुःख देख्न म सक्दिन तर दुःख चाँही लाग्छ जब मेरा आफन्त भनाउदाँहरुनै हराएका छन् । भएका पुराना नम्बरमा सम्पर्क गर्दा ति नंबरहरु आउटडेटेड भइसकेका छन् ।
तिमीले देख्दिैनौं शायद की ! तिमी र म एउटै रुखका केवल फरक हागाँहरु हौं तिम्रो प्रफुल्लता सगंसगैं मेरा हाँसोका फोहोराहरु फूट्नेछ
अरु कसैले मेरो भगवानको विनाश गरेको बाहेक म सबकुछ सहन गर्छु जब मैले मेरो परिरुपी दैविक आत्मा बलिदान गर्नेछु म त्यो रुप लिनेछु जुन कुनै पनि मष्तिष्कले सोच्न सकेको छैन अथवा मलाई उपस्थितीविहिन उपस्थितीबाट मुक्त गराउ
सम्पूर्ण संसारमा कश्मिरलाई बर्षौदेखि एक्लो बनाइनुको कारण भारतियहरुको एतिहासिक पृष्ठभुमीप्रतिको असाक्षरता हो भनेँर १९औँ शताब्दीका अमेरिकी कवी रोबर्ट लोवलले भनेका थिए र यहि भनाइलाई जोडदै इन्शाहले भारतिय राजनितीको कश्मिरका मुद्वाहरुप्रतिको अझ संबेदनशीलताकोलागी इरानबाट आब्हानगरेकी छिन् । करफ्यूले मान्छेहरुको चहलपहलमात्र हैन यर्थाथकथाहरु र घटनाहरुपनि हामीसमक्ष आउन दिदैन भन्दै इन्शाहले आफ्ना कविताहरुका माध्यमबाट सत्यतालाई सम्बोधन गर्दछिन् ।